Bishii Meey 18, 2019, waa 17-kii (2019) Shiinaha Xannaanada Xayawaanka ee Sanadlaha ah iyo 2019 Shixnadda Xayawaanka ee Caalamiga ah ee Shiineeska ah ayaa laga furay Xarunta Caalamiga ah ee Wuhan. Iyada oo ujeeddada iyo himilada hal abuurka ay hormuud u tahay horumarka wershadaha, Animal Husbandry Expo ayaa soo bandhigi doonta isla markaana kor u qaadi doonta tikniyoolajiyadii ugu dambeeyay iyo waxsoosaarkii warshadaha xoolaha si loo wanaajiyo awooda hal abuurka iyo heerka warshadaha isla markaana kor loogu qaado kor u qaadida warshadaha. Bandhigga sedexda maalmood ah waxaa ka qeyb galaya in kabadan 1000 shirkadood oo ka kala yimid daafaha dunida iyo ururada xoolaha ee horumarsan ee xoolaha.
Shirkad tayo sare leh oo ilaalisa xayawaanka, kooxda'ondond 'waxay had iyo jeer qaadanayaan mas'uuliyadda "ilaalinta iyo raritaanka warshadaha xannaanada xoolaha". Iyada oo la raacayo shuruudaha cusub ee isbeddelka iyo casriyeynta warshadaha xannaanada xoolaha, Depond wuxuu keenayaa alaabooyin istiraatiijiyad dheeri ah oo la jaanqaadaya isbeddelka mustaqbalka ee mustaqbalka si ay uga muuqato Bandhiga Xayawaanka.
"Go'aan, shaqo fiican, tayo sare leh iyo cagaar" waa badeecada joogtada ah ee wax soosaarka kooxda Depond. Alaabooyinka lagu soo bandhigay carwadan ma ahan kaliya alaabada iibinta kulul ee lagu tijaabiyay suuqa, laakiin sidoo kale waa istaraatiijiyad cusub oo cusub oo ay kujiraan waxyaabo farsamo sare ayna ku guuleysteen sedexda qaybood ee qaran ee daawooyinka xoolaha. Intii lagu jiray bandhiga, wada-hawlgalayaasha cusub iyo kuwii hore ee u yimid bandhigga ayaa muujiyay daneyn xoogan oo ku saabsan wax soo saarka shirkadda 'Depond', inta badan macaamiisha cusub waxay muujiyeen sida ay u jecel yihiin inay iskaashi la yeeshaan, iyo isweydaarsi dheeri ah oo dheeri ah ayaa la qaban doonaa kulanka ka dib.
Bandhigan ma ahan oo keliya daaqad wax ku ool u ah kooxda si ay u muujiso awoodeeda, u horumariso macaamiisha una kobciso alaabada, laakiin sidoo kale waa tallaabo muhiim u ah kooxda inay si qoto dheer u galaan suuqa oo ay u fahmaan baahida warshadaha iyo isbeddelada caalamiga ah. Macallimiinta farsamada ee kooxda iyo wakiillada macaamiisha waxay si joogto ah isweydaarsadaan fikradda ilaalinta firfircoon, dhibaatooyinka abuurka, tikniyoolajiyada adduunka hoggaamisa, teknolojiyadda iyo aqoonta kale, kuwaas oo bixiya fikradaha ku saabsan baarista iyo jihada horumarka iyo casriyeynta teknolojiyada ee alaabada 'Depond'. Mustaqbalka, Depond wuxuu sii wadi doonaa inuu sii qoto qoto dheer baahida suuqa, wuxuu ku dhaqmaa fekerka “weheliyaasha beeralayda”, iyo wuxuu soo bandhigi doonaa alaabo badan oo badbaado, wax ku ool ah iyo qiimo badan oo ku baxa wershadaha taranka.